Mombe Succumbs kune yayo dzidziso | Martech Zone
Herd Succumbs kune yayo yega Dzidziso
Svondo, November 4, 2007 Muvhuro, Kukadzi 8, 2016 Douglas Karr
Zvangu zvemukati pane saiti zvave zvishoma mwenje mavhiki mashoma apfuura - ichatora munguva pfupi. Ndanga ndichiverenga zvakanyanya kushingaira, kutaura nekushanda mwedzi wapera uye zviri kukanganisa blog. Kunyangwe zvirimo zviri pasi izvozvi, pfungwa dzangu dziri kumhanya nezviri mukati memavhiki anotevera, saka ive shuwa kunamira neni. Kana izvo zvisina kukwana, ini ndavhara wekupedzisira mutsigiri we $ 1,000 Kupa - Vontoo. Tiri kushanda pane yakanaka inotonhorera demo yeVontoo yepositi!
Vhiki rino ndakapedza chitofu, bhuku na Maka Earl. Handina chokwadi chekuti ndapedza nguva yakawanda nebhuku gore rino, kuverenga kunoshamisa uye ini ndaikurudzira kune chero mushambadzi.
IMHO, Herd gona ave nepfuti yekuve rakakosha bhuku rebhizinesi kuverenga gore rino - kunze kwekunge ini ndichifunga kuti Mako anotera kune dzimwe dzidziso dzake nemhedziso. Maka anotsanangurwa pajekete se
Mumwe wevatungamiriri vekurukurirano vepasirese uye anofunga anotungamira nezve zvigadzirwa, kushambadzira uye maitiro evatengi
Mukuverenga bhuku raMark, ini ndinowana humwe humbowo hwekuti Mark anotora kusavimbika kwechitendero chakarongeka uye nezvematongerwo enyika ezvekurudyi. Iyi ndiyo misoro miviri yatinofungidzira kuti tidzivise mubhizinesi, asi nhaurwa yaMark yekushandura maitiro emawoko aisakwanisa kutaura kumatopiki maviri akateedzana zvakanyanya mushure memombe. Panzvimbo pekubata pane yega yega-yakadzika, Maka akakanda vaviri vakatsoropodza mukati ndokusiya ipapo. Kutaura chokwadi, ini ndaive neyakaoma kugaya rese bhuku nekuda kweizvi. Izvo zvinosuruvarisa - uye zvinogona kunongedzera kuti nei ndakapedza nguva yakawandisa nebhuku. Maka aive neruzivo rwakawanda kwazvo zvekuti ndaifanira kumanikidza kuti nditsvage iyo hombe info uye ndisiye pfuti pano nepapo.
Iyo Yezvematongerwo enyika Herd
Mhedziso yechipiri kubhuku ndeyekuti Vanhu havana kuvimbika (kana zvisiri zvakanyanya zvisina basa) zvapupu. Nekudaro, muchitsauko chimwe chete icho Maka achiisa mhedziso iyi, anotora pfuti kuna 'George anoda kuziva' uye sarudzo ya2004 kukunda naGeorge Bush. Yekolishi yesarudzo yaive danho rakajeka rakafungwa nemadzitateguru emunyika ino kuona kuti vhoti yakakurumbira yaisagara ichiita mutungamiriri uye ichitaura nezvinonetsa zvaMark nezvehunhu, njodzi uye mibairo inosanganisirwa nepfungwa dzemombe.
Dai United States yakaita sarudzo dzakakurumbira dzakatarisira hutungamiriri, 90% yeUnited States yaizosara kumashure apo shamwari dzedu muWashington dzaingoteerera makuru emaguta. Yekolishi yesarudzo inopa chiyero chinoda kuti hurumende yedu itarise kune vanopfuura vazhinji chete ... ivo vanofanirwa kutarisisa kumatunhu. Chokwadi, sarudzo dzakakundwa muFlorida neOhio, asi pasina koreji yesarudzo, matunhu aya angadai asina chekutaura musarudzo.
Ini ndinotenda bhuku raMark raizove rakashandirwa zvirinani kana akakurukura nezveyero yezvakakurumbira vs zvinomiririra zvinoda kuvhota kuUnited States uye kuti zvinowedzera sei ku "American Dream" nekupa wese munhu kodzero yekutsvaga mufaro, kwete chete nzvimbo dzine vanhu vakawanda.
Imwe pfuti yandakaona mubhuku yaive iyi kusvika kumagumo,
tava kuziva kuti pasi rakafanana nebhora, kure nekuve pakati penzvimbo yedu yezuva sezvakadzidziswa neChechi yeRoma… ”
Ehe saizvozvo Kereke yeRoma yakadzidzisa izvozvo! Yakanga iri dzidziso yakajairika panguva iyoyo uye yaida kuratidzwa. Izvo zvinotora nguva uye pazvaive, sainzi yakanyorwa zvekare.
Mhedziso 4 inotaura nezvekuzvininipisa uye kutaura kune mumwe munhu. Nei Mark akataura nezve Chechi mumanzwiro ake? Zvaive nebasa here kuti yaive Chechi? Kune avo vanhu vanoziva kukosha kweMachechi nhasi uye mazana emakore apfuura, isu tese tinofanira kuziva kuti, kuburikidza nekutadza kwayo nekusaziva, Chechi yakavaka hwaro hwezvikoro zvedu zvazvino. Semachechi ekare, mune ramangwana tinozoona kuti tiri kudzidza zvinhu nhasi zvisiri izvo sezvakanyorwa nevadzidzi vedu vakangwara. Tinofanira kuzvininipisa.
Yakaputirwa mune zvese Zvematongerwo enyika uye Dzidzo ndiko kunzwisisa kwedu kweZvakatipoteredza. Maka anoita chirevo sekunge zvakafungidzirwa kuti indasitiri yeMafuta iri kukonzera kukuvadza nharaunda. Izvi zviri kunyorera ku'Mufudzi '. Muchokwadi, kune zvakawanda zve kusava nechokwadi munharaunda yesainzi kuti ndozvazviri zvachose.
Kutora divi pane imwe neimwe yenzvimbo idzi pachinzvimbo chekunyatso kudzidza sainzi kumashure kwekuti ivo vanokanganiswa sei kusaremekedza uye kunoda kuongororwa pamwe nezvakawanda sezvinoitwa naMako nedzimwe nyaya dziri mubhuku. Zvekare zvakare, ini ndakaona bhuku iri richikosha - asi ndinofunga kuti Mark angadai akatora maonero ane hungwaru pane imwe neimwe yenzvimbo idzi uye aine zvakawanda zvaizoitika
Tags: bhukuchinjadangahunhu hwemombemafungiro emombemaka makamaitiro mazhinji
WordPress: Tsvaga Saiti Inotsvaga neGoogle Analytics
Mbudzi 4, 2007 na5: 59 PM
Ndokumbirawo ugare uine yakavhurika pfungwa kana uchifunga nezve izvi zvitatu zvinhu. Vese vatatu vakapomerwa zvematongerwo enyika uye zvinogona kukonzera kuti iwe usarudze kurega kuverenga blog yangu. Ndinovimba kwete!
Ini handisi mutsigiri waBush, kunyanya zvine chekuita nekukanganiswa kwekodzero dzeBumbiro. Patinorasikirwa nerusununguko rwakadai, iko kutenda kwangu kuti magandanga akunda.
Ini zvakare handisi munhu anofarira zvechitendero chakarongeka - handifunge kuti uchawana vhesi rimwe chete mubhaibheri rinodaidza maChechi mahombe anodhura mamirioni emadhora uye anotungamira kurira kwezvematongerwo enyika. Asi ndinotenda kuti Makereke anoita musiyano mukuru munzanga. Ndakaona mutsauko wekutanga-ruoko, mamirioni emadhora muzvipo achienda kunharaunda nevanhu vanovada.
Ini handisi wezvezvakatipoteredza, asi ini ndoda kuona isu tichimira kuzadza marara ekuzadza uye zvichienderana nedzimwe nyika kune yedu oiri. Kubatsira nharaunda kunobatsira mune izvo zvikonzero, saka ini ndinowanzo tenderera munzira iyoyo.
Nov 5, 2007 pa9: 05AM
Yakanaka kwazvo posvo, Doug. Ndinozviona ndisingakwanise kuteerera kumamwe ma radio / TV hurukuro inomiririra (zvese kurudyi uye kuruboshwe) b / c ivo havakwanise kutarisa mativi ese vasati vaita sarudzo. Zvakafanana nekufunga uye kuferefeta vatora chigaro chekumashure kunwa kweruzivo uye kusvetukira kuzvisarudzo zvinoenderana nemanzwiro atakagadza zvichibva pane zvatakasangana nazvo. Ini ndinofunga chero munhu ari paziso reruzhinji, chero munhu akapiwa izwi reruzhinji, vanyori, vapepeti, nhau, isu tese, kunyangwe avo vane blog, vane mutoro kuruzhinji kuratidza zvimwe zvine musoro nharo neruzivo. Handibvumirane newe nguva dzose, asi ndinogara ndichinzwa kuti unoita izvi nemazvo. Ndokusaka ndichiramba ndichiverenga. . .
Ndiri kuramba ndichiyeuchidzwa nguva pfupi yapfuura nezve chimwe chinhu chandakanzwa ndiri mudiki kwazvo, "Zvinhu zvese zvine mwero. . . ”
Mbudzi 4, 2007 na10: 49 PM
Doug, inotonhorera posvo. Kuti uwane imwe ongororo (asi kwete kuhuwandu) tarisa chiitiko chakafanana, pasina zvinamato nevezvematongerwo enyika, tarisa "Huchenjeri hweVazhinji" naJames Surowiecki. Yakanga iri rimwe remabhuku ekutanga pamusoro pe "fungidziro yemisika" iyo isiri chaizvo izvo Herd zvaari kuwana, asi zvine hukama chaizvo. Pfungwa yekutanga ndeyekuti iwe unogona kumisikidza "musika" pane, woti, sarudzo dza2008 uye nekuita kuti vanhu vatenge "zvibvumirano" zvibvumirano zveavo vavanofunga kuti vachakunda. Kana mhedzisiro yavo ikakunda pane imwe nzira yekuripwa. Boka revanhu rakangwara kupfuura chero nyanzvi kana boka diki uye rine simba rekufanofungidzira kupfuura sarudzo. Iko kune kudzidza kuUniiv. yeIowa inoita izvi pasarudzo dzemutungamiri wenyika uye ini ndinokanganwa kuti zvinodzokera kure zvakadii, asi handifunge kuti vapotsa imwe futi!